Tırtıklatmak Nasıl Yazılır Ne Demek Sözlük Anlamı Nedir - Nasıl Yazılır. İnfo
Ungayibhala njani iJiggle
Jigging Upelo oluchanekileyo
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo ekubhaleni amagama yenziwa kwigama langaphambili. Yindlela yokubhala edidayo kakhulu. Umzekelo, (Prejudice) ligama elahlukileyo, ngelixa igama (Hunch) libhalwa kufutshane. Imigaqo yopelo inokwahluka ngokweziphumo zexesha lethu.Ndicela uqaphele!, Nangona omabini la magama ebhalwe kuqala, elinye libhalwa ngokwahlukeneyo elinye lincamathisele.
Kumaxesha amandulo, abantu babezobe amanani athile ematyeni kwaye bazame ukucacisa into komnye umntu okanye kubantu abaza kuza kamva. Namhlanje, singathumela umyalezo wethu kumntu okwenye indawo yomhlaba nge-imeyile, ubuncinci, asizami ukuzoba into ematyeni kwaye sichaze into ebantwini abaza kuza emva kwethu. Kuyimfuneko ukulazi ixabiso letekhnoloji.
Kukho ukuthandabuza rhoqo malunga nokubhalwa kwezimamva -de kunye -da. Kulula kakhulu ukusombulula le meko. Ukuba singachaza ngemizekelo; Isihlanganisi –de kunye –da nezimamva zibhalwa ngokwahlukeneyo. Ke sazi njani ukuba la magama sisihlanganisi? Isihlanganisi-de-naso sinentsingiselo yodwa. Funda nesivakalisi uze ungasihoyi isimamva.Ukuba intsingiselo yesivakalisi iphosakele, esi sisimamva. Masingayihoyi kwaye sibhale: iigadi zeseleri. Ewe, isigwebo sophulwe ukuze sikufutshane. Ukuba ngokwahlukileyo -de kunye -da akuhoywa kwaye kufundwa, akukho kugqwetha. Umzekelo: bendisemva nje kancinci nam. Masivale: Ndiphantse ndalibaziseka Njengokuba ubona kule mizekelo, kukho iipateni ezithile, kwaye kufuneka silandele ezi patheni.
Ithetha ntoni iJiggle?
Ungayibhala njani iJiggle?
Khawuleza kwiinyawo zakho
Ipuli yokuqubha yangaphakathi
Ukufa amalungu athile
Akukho mali iyilwayo
Iiseli ezibomvu zegazi